नयाँ वर्षमा थाइल्याण्ड घुम्ने कि ? आयो ५ दिन ४ रातको प्याकेज « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
नयाँ वर्षमा थाइल्याण्ड घुम्ने कि ? आयो ५ दिन ४ रातको प्याकेज
काठमाण्डौं । आउटलुक नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्सले ५६ हजार रुपैयाँमा ५ दिन चार रातको थाइल्याण्ड टुर प्याकेज ल्याएको छ । सस्तो देखि महंगोसम्म टुर प्याकेज हुनेगरे पनि यो मध्यम रेट भएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्र्देशक उद्धव कुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
‘ यो ५६ हजारको प्याकेजमा काठमाडौं एयरपोर्टबाट यात्रागरेपछि फर्केर आएसम्म पर्छ तर ग्रहकलाई प्याकेज बाहिरको अन्य खर्च भने यात्रुले नै खर्चनुपर्छ’ उनले भने। यो प्याकेजमा कम्पनीले भ्रमण टोलीलाई तीनतारे होटलमा बसाउने छ र अंग्रेजी बोल्ने गाइडको व्यवस्था, प्रईभेट सवारीको व्यवस्था गर्नेछ । तर यो भन्दा सस्तो प्याकेजको लागि त्यही अनुसारको सेवा सुविधा भएको आउटलुक नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्सका निर्देशक पुष्पराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्याकेज अनुसार, भ्रमण टोली पहिलोदिन काठमाडौंबाट ब्याङ्कक पुगेपछि रेष्टुरेन्टमा खाना खाएर त्यो दिन त्यहीको तीन तारे होटलमा बास बस्नेछ । दोस्रो दिन बिहान थाइल्याण्डको पुरानो राजधानी ट्याम्पल अफ डाउन जानेछ त्यहाँ घुमेपछी त्यही दिन पटाया पुग्नेछ र त्यँहाको टाइगर जु को अवलोकन गर्नेछ । र त्यो दिन त्यहीको होटलमा बस्नेछ ।
तेस्रो दिन टोली कोरल आइल्याण्ड जानेछ त्यहा डुङ्गामा घुम्ने तथा वाटर गेमहरु खेल्नेछ । दिउसो खाजा खाएपछी पटायाको फ्लोटीङ मार्केट ९डुङ्गामा भएको बजार० घुम्नेछ र बेलुकी त्यँहाको कल्चरल प्रोग्रामहरु हेर्ने छ ।
चौथो दिन टोली ब्याङ्कक जानेछ र त्यहाको सफारी वल्र्ड जानेछ । त्यहाँ तालिम प्राप्त जनावरको मज्जा लिन सकिनेछ । त्यसपछी त्यहाँको सर्पको फार्म मौरीको फार्म हेरेर होटल फर्कनेछ । र पाँचौ दिन बिहान ब्रेकफास्ट गरेर काठमाडौ फर्किने छ।